မြင်းမိုရ်ဦး: သွားပိုးစားရောဂါကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ chewing gums
သွားပိုးစားရောဂါကိုကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာ၊ သွားပိုးစားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ sugarless chewing gums (သကြားဓာတ်မပါတဲ့ပီကေ) ကိုမှန်မှန်ဝါးပေးခြင်းကလည်းထိရောက်တဲ့နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုchewing gumsတွေထဲမှာ xylitol နဲ့ recaldent ကလူသိများလာပါပြီ။ xylitol ဟာသွားပိုးစားရောဂါဖြစ်စေတဲ့သကြားဓာတ်မဟုတ်တဲ့အပြင်၊ သွားမျက်နှာပြင်က ပိုးမွှားတွေပွားများတာကို ဟန့်တားပေးနိုင်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်တာမို့ သွားပိုးစားရောဂါကာကွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
recaldent ကတော့၊ အက်စစ်ဓာတ်အစားခံရတဲ့ သွားကြွေလွှာကို ပြန်မာကျောစေလို့ (remineralization/recalcification) ဆိုတဲ့ အာနိသင်ကြောင့် Recaldent လို့နာမည်ယူထားပုံရပါတယ်။ CPP-ACP လို့အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ complex of casein phosphopeptides and amorphous calcium phosphate ဓာတ်နဲ့ဖော်မျုလာထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ CPP က နို့ထဲမှာပါတဲ့ဓာတ်တမျိုးဖြစ်ပြီး၊ သွားမျက်နှာပြင်ကြွေလွှာထဲကို ကယ်လစီယမ်-ဖော့စ်ဖိတ်ဓာတ်တွေစိမ့်ဝင်စေတဲ့အတွက်၊ ကြွေလွှာပိုမိုမာကျောစေပြီး ပိုးစားဒဏ်ခံနိုင်စေပါတယ်။ နွားနို့သောက်ရင်လည်း အလားတူအာနိသင်ရပါတယ်။
chewing gums ၀ါးခြင်းအားဖြင့်၊ ဖော်စပ်ပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေရဲ့အာနိသင်အပြင်၊ တံတွေးထွက်စေမှုကိုလှုံ့ဆော်တဲ့အတွက်၊ ခံတွင်းထဲမှာ တံတွေးစီးဆင်းမှုများလာပြီး၊ စားကြွင်းစားကျန်နဲ့ အက်စစ်ဓာတ်တွေကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးလို့ အနံ့အသက်ပါပျောက်ပြီး ခံတွင်းရှင်းစေပါတယ်။ ထမင်းစားပြီးချိန် ပီကေ၀ါးကြည့်ရင်၊ ဒီအာနိသင်ကိုလက်တွေ့ခံစားသိရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အပျင်းပြေဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၀ါးကြမယ်ဆိုရင်တော့ xylitol နဲ့ recaldent ကိုညွှန်းလိုက်ပါတယ်။ Regeneartion (ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း) ကို သုတေသနလုပ်နေတဲ့၊ သွားဆရာဝန်တစ်ယောက်အမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ recaldent ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ သွားပိုးစားကာကွယ်စေနိုင်ဖို့အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်တော့ ၀ါးရပါလိမ့်မယ်။
၁။ Novel Remineralization Technology of Recaldent asaFood For Specified Health Uses: Acid Resistance of Enamel Subsurface Lesions Remineralized by Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate (CPP-ACP) Cell (Tokyo)(2005)
၂။ Xylitol Chewing Gums and Caries Rates: A 40-month Cohort Study Journal of Dental Research, Vol. 74, No. 12, 1904-1913 (1995)
Posted by Dr. Nyan at 5:22 PM
အဲဒီ ပီကေတွေက လွယ်လွယ် ဝယ်လို့ရလား ဆရာ
ဒီပီကေ ကို ဥုးဇင်း ကိုယ်နှိုက်က သွားပိုးစားနေသူဆိုတော့ ၀ါးချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အံကပ်သွားတု တပ်ထားတဲ့ ဥုးဇင်း က ပီကေ ကို ၀ါးလိုက်ရင် ကပ်-ကပ်ပါလာတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ မသိဘူး။ ဒေါက်တာဉာဏ် ... ညွှန်ပြသလို ၀ါးရမယ့်အချိန်ကလည်း (15) မိနစ်ဆိုတော့ တော်တော်ကြာတယ်လေ။
နောက် ...recaldent ဆိုတဲ့ သည်အမျိုးအစား ပီကေ ကိုတော့ အိန္ဒိယမှာ တော်တော် ရှာယူရဦးမယ် ထင်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဥုးဇင်း ပညာသင်နေတဲ့ နေရာကိုက တောနဲနဲ ကျလို့ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်... ဒေါက်တာဉာဏ် Post တွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ မေးစရာတွေကတော့ ရှိနေဦးမှာပါ၊ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
သတိတရ-မေတ္တာဖြင့် ... ဥုးဇင်း (ခေတ္တ-အိန္ဒိယ)
ဆွမ်းဖုန်းပေးပြီးချိန်အံကပ်ချွတ်ထားချိန်မှာ သဘာဝသွားကျန်လေးတွေရှိနေသေးရင် ၀ါးလို့ရကောင်းရနိုင်ပါမယ်ဘုရား။ ၀ါးလို့ရခဲ့ရင်တော့၊ သဘာဝသွားကျန်တွေမှာ အစာကပ်နည်းပါးစေပြီး ပိုးစားကာကွယ်တဲ့အာနိသင်ရစေမှာပါဘုရား။